Virtualdub biir AVI - Sida loo soo biir AVI Videos la VirtualDub
> Resource > Video > Sida loo soo biir AVI Video Faylal ay la VirtualDub
Sida loo soo biir AVI Video Faylal ay la VirtualDub
Laga yaabaa in aad diiwaan badan oo videos in AVI videos ama aad leedahay videos fiidiyo kala duwan oo qaab AVI. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad ku milmaan qaar ka mid ah videos AVI soo galeen AVI weyn si ay si habsami leh oo si joogto ah u ciyaarin karin.
VirtualDub waa software ah video free tafatirka kuwaas oo kaa caawin kara in aad ku biiri badan files AVI mid si fudud oo dhakhso ah. Ka sokow, waxa ay sidoo kale cadaadin karo videos in tirada yar. Fadlan la soco in aad karaa biiro kaliya AVI videos in VirtualDub . Haddii videos ma ku jiraan AVI, waxaad u tagi kartaa qalab kale video tafatir sida Wondershare editor video .
Ka hor inta aanad bilaabin, download nooca ugu dambeeya ee VirtualDub ay si rasmi ah oo ku xidh ka dib markii duuban. Markaasaa waxaa u ordaan oo raac talooyinka hoos ku Hanuuniyaa inay ku biiraan AVI la VirtualDub .
VirtualDub biiro hage AVI
1. Waxaad ku dari kartaa AVI videos adigoo gujinaya File> Open Video File dooro videos ka your computer. Markaa waa inaad aadaa File> Qaybaha Append Avi ku darto AVI kale video aad rabto in aad qabto in aad video weyn. Waxaad ku dari kartaa oo kaliya hal filim waqti, sidaas darteed haddii aad leedahay badan qaybo video yar, waxaa laga yaabaa in aad xoogaa waqti ah ku bixiyaan ku daray videos. Si aad ku dari more videos, kaliya sii wadaan in ay ku noqdaan qayb File Append AVI iyo dar AVI videos sida aad jeceshahay. Kaliya u hubso video size ma yahay mid weyn.
2. Markaas waxaad tagi kartaa Video menu iyo in la hubiyo Processing Full Mode waxaa halkaas soo xulay.
3. Riix riixo hoos Video iyo dooran codecs video loogu soo saarka aad ugu videos.
Talooyin : Under menu Video ah, sida aad ka arki karto, waxaa jira qaar ka mid ah hawlaha tafatirka video sida filtarrada, qabsiga midabka, iwm saamaynta filter, waxaad ku eegaan karo videos by File garaacid> Kulanka Xiisaha Leh sifeeyay.
3. Ka dib marka aad ku dhameysteen video tafatirka iyo codecs video Xulashadda, waxaad tagi kartaa File> Save Segmented AVI si loo badbaadiyo shaqadaada si aad u computer. Ku qor magaca cusub ee aad isku daro video oo dhigay folder Ahaado, markaas ha VirtualDub sameeyo laga guurayo aad u.
Iyo in dhan. Runtii waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan VirtualDub inuu ku biiro videos AVI. Ka dib markii laga guurayo, inaad si fiican u ciyaari lahaa videos si loo hubiyo in isu geynta videos shaqeeyaan ganaax aan qaladaad sida out of audio u hagaagsan, iwm
Tan iyo VirtualDub kaliya taageeraa AVI ku biiro, haddii aad heshay video qaabab kale oo doonaya in ay ku soo biiraan, aad awoodo user Wondershare Video Editor u Iyadoo, aad isku dari kartaa oo dhan videos caanka ah mid.
By habka, wanaagsanaan doonaan iyo in ay gubi AVI videos in DVD wanaagsan video ilaalinta iyo u raaxayn ciyaaryahanka DVD guriga adiga ama TV qoyska iyo saaxiibada.
Top 20 Tutorial Video Goobaha si ay u daawadaan sida loo Video Casharrada
Sida loo Download iyo Beddelaan Hulu Video in MP3
Sida loo Play AVI on Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah